Nahoana no Tsy Misy Fiadanana Mihitsy eto An-tany?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Nzema Papiamento (Aruba) Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Télougou Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Izay fitondram-panjakana afaka manova ny toetran’ny olona ihany no hahavita hampanjaka ny fiadanana
Milaza antony roa lehibe ny Baiboly. Voalohany, tsy noforonina hitondra samirery ny fiainany ny olona, na dia mahavita zavatra tsara be dia be aza. Faharoa, tsy mahomby ny fikasan’ny olombelona satria “eo ambany fahefan’ilay ratsy”, na i Satana Devoly, “izao tontolo izao manontolo.” Tsy misy fiadanana àry eto an-tany, na eo aza ny ezaka ataon’ny olombelona.—Vakio ny Jeremia 10:23; 1 Jaona 5:19.
Vao mainka koa tsy misy ny fiadanana satria tia tena sy tia laza ny olona. Izay fitondram-panjakana mahavita mampianatra ny olona eran-tany ho tia ny tsara sy hifampiahy ihany no ho afaka hitondra fiadanana.—Vakio ny Isaia 32:17; 48:18, 22.
Iza no hitondra fiadanana eto an-tany?
Nampanantena ilay Andriamanitra Mahery Indrindra fa hanangana fitondram-panjakana hitondra ny tany manontolo izy. Hisolo ny fitondran’olombelona rehetra izy io. (Daniela 2:44) I Jesosy, ilay Zanak’Andriamanitra, no hitondra. Antsoina hoe “Andrianan’ny Fiadanana” izy, satria hanafoana ny ratsy rehetra eto an-tany ary hampianatra ny olona ho tia fiadanana na ho tia fihavanana.—Vakio ny Isaia 9:6, 7; 11:4, 9.
Olona an-tapitrisany izao eran-tany no efa manaraka ny toromarik’i Jesosy, ka mampiasa ny Baiboly mba hampianarana ny hafa ho tia fihavanana. Tsy ho ela dia hanjaka eto an-tany ny fiadanana.—Vakio ny Isaia 2:3, 4; 54:13.